Valve inoshanda pane inotakurika Linux-yakavakirwa koni | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Graphics, Linux Mitambo, Noticias, chiutsi
Kubva kuAss Technica portal ivo vatangisa mamwe runyerekupe nezve itsva Valve chirongwa. Iyo Steam kambani inoita kunge iri kushanda koni nyowani mushure mekundikana kweSteam Machine. Mune ino kesi haizoyedze kukwikwidza ne PlayStation kana Xbox, asi ichave inotakurika koni mumhando yeNintendo Shandura.
Ichave iri mhando yecomputer laptop inozoshandisa Linux sechigadziko, kuwedzera pakuve nemutengi Steam isati yaiswa, inobata skrini uye Joy-Con mhando mativi evanodzora. Zvinotaridzawo kuti ichashandisa x86 machipisi kubva kuIntel kana AMD, chimwe chinhu chisina kunyatsojeka parizvino. Izvo zvinoita sekunge zvine chokwadi ndechekuti NVIDIA yakabviswa kunze, uye kuti pachave nemamodeli akatiwandei ane akasiyana mitengo uye kugona.
Inotaridzikawo kunge chichava chigadzirwa yakafara kupfuura iyo Nintendo Chinja, uye neyakajairika assortment yemabhatani uye zvinokonzeresa pamwe neparutivi rwekufara, uye kanenge kamwe chete kadiki-kadiki wepasipi yekubata. Uye kune rimwe divi, zvinoita zvakare kuti unozokwanisa kubatana kune yekunze yekutarisa kuburikidza neUSB-C.
Asi ... runyerekupe urwu runobva kupi? Zvakanaka, chokwadi ndechekuti iri semhedzisiro ye kuwanikwa kwaPavel Djundik, iye mugadziri weSteamDB, uyo akawana kodhi yeiyo nyowani vhezheni yeSteam ine macodenames SteamPal uye SteamPal Mitambo, inova shanduko yeNeptune neNeptune Optimized Mitambo kubva gore rapfuura. Pakutanga zvaifungidzirwa kuti raizove rwumwe rudzi rwekuraira iyo Steam yakafanana neiyo yakanyangarika Steam Controller, asi ikozvino zvinoita sekunge yakabatana neinotakurika mutambo mutambo.
Kufambira mberi ne Proton uye Proton GE uye kusangana kwayo neSteam kunogona zvakare kuvhura nyowani nyowani yekuenderana kune yemuno Windows vhidhiyo mitambo inogona kumhanyisa pane ino koni. Muchokwadi, nekuda kwavo iwe unogona ikozvino kuridza mazita akadai seCyberpunk 2077, Horizon: Zero Dawn, Rufu Stranding, nezvimwe paLinux, nekudaro uchiwedzera kune anopfuura mazana matanhatu ematanho anoenderana.
Chekupedzisira, hapana rumwe ruzivo rwunozivikanwa, kana iwo wekupedzisira mutengo kana zuva rekuratidzira. Asi inogona kusvika pakupera kwa2021 ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Valve inoshanda pane inotakurika Linux-yakavakirwa koni